चितवनका २ र ३ क्षेत्र चर्चामा | चितवन पोष्ट
गृह » चितवनका २ र ३ क्षेत्र चर्चामा
भरतपुर । चितवनमा ३ वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव हुँदैछ । तर, हाल क्षेत्र नम्बर २ र ३ विशेष चर्चामा छ । क्षेत्र नम्बर २ मा एमाले जिल्ला अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेल र चुनावी तालमेल गर्ने भनेको अर्को कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई अघि सारिएको छ । दुवै सर्वसम्मतरुपमा पार्टीबाट अनुमोदित भएका छन् । चुनावी तालमेलमा एमाले तथा माओवादी केन्द्रले ६० र ४० को अनुपात मिलाएजस्तो चितवनमा भने ३ क्षेत्रमा कसले २ वटा क्षेत्र लिने वा पाउने भन्ने बारेमा जनस्तरमा चासो बढेको छ । केन्द्रमा नै निर्वाचन क्षेत्र अनुसार सिट विभाजन हुने भएकाले जिल्लाबाट केही भन्न नसकिने एमाले जिल्ला उपाध्यक्ष तेजेन्द्र खड्काले बताए ।
क्षेत्र नम्बर १ मा एमाले नेता पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको निश्चित नै भइसकेको अवस्थामा क्षेत्र ३ मा पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उम्मेदवारी निश्चित बनिसकेको छ । चितवनको क्षेत्र नं.१ मा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे सिफारिस भइसकेकोले माओवादीले कुनै दाबी नगर्ने जनाएको छ । चुनावी भिडन्तमा दुइ बहालवाला मन्त्रीको नाम पनि चर्चामा छ । कांग्रेसका शिक्षा राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारी र राप्रपा प्रजातान्त्रिकका विक्रम पाण्डे प्रतिस्पर्धामा उत्रने सम्भावना उच्च बनेको छ ।
बादल कि पोखरेल
तर, क्षेत्र नम्बर २ मा भने कुन पार्टीले टिकट पाउँला भन्ने चुनावी समिकरणले सबैलाई अचम्मित बनाएको छ । अर्कोतर्फ एमाले नेता पोखरेल र माओवादीका बादल दुईमध्ये एकलाई समानुपातिकमा लैजाने चर्चा पनि रहेको छ ।
माओवादी नेता बादल केन्द्रीय निर्णय अनुसार नै चितवन क्षेत्र नं. २ बाट चुनाव लड्न लागेका हुन् । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं. २ बाट विजयी भएका बादल २०७० सालको निर्वाचनमा वैद्यसँग रहेर चुनाव नै बहिस्कार गरेका थिए । त्यस बखत माओवादीले यस क्षेत्रमा साहित्यकारसमेत रहेका माओवादी पार्टीका विचारक विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ लाई उठाएको थियो । यस क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार शेषनाथ अधिकारी (हालका शिक्षा राज्यमन्त्री) एमाले उम्मेदवारलाई जम्मा ९९९ मतले हराउँदै विजयी भएका थिए ।
प्रचण्डको उम्मेदवारी सार्वजनिक भएसँगै चितवन क्षेत्र नम्बर ३ चर्चामा रहेकोमा बहालवाला वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री एवम् राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)का नेता विक्रम पाण्डेले उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका छन् । नेता पाण्डे साविक क्षेत्र नं.५ का सांसदसमेत हुन् । हाल कायम निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत यो क्षेत्र ३ मा पर्दछ । स्थानीय तहको चुनावमा माओवादी विजयी भएको यस स्थानमा राप्रपा चौथो स्थानमा झरेको थियो । यस क्षेत्रमा यसअघिको निर्वाचन क्षेत्रको ४ नम्बरको पूरै भाग पर्दछ । तत्कालीन समयमा सुशील कोइराला विजयी भई उपनिर्वाचनामा छाडेको यस जिल्लामा पछि पनि कांग्रेसकै उम्मेदवार रामकृष्ण घिमिरे विजयी भएका थिए । हाल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनका कार्यदल सदस्यसमेत रहेका नेता पाण्डे सोही गठबन्धनबाट चुनाव लड्न लागेका हुन् ।